Mpamatsy Panty ao Abdomen - orinasa mpanamboatra an'i Panty Abdomen
Vehivavy mpivarotra mitazona pataloha fonosana Panty bokotra Panty But Enhancer Hip Shapewear Panafam-paosy Push up Panties Plus habe
Ity vokatra ity dia mampiasa lamba tena mainty, sekely sy fofonaina, mety amin'ny akanjo fahavaratra. Ny andilana miharihary dia natao hanandratra ireo sisim-bolo mba hanambara ny curve feminis.Shapermint ho an'ny fifehezana fitavan'ny vehivavy sy ny Butt Lifter.
Vehivavy tsara tarehy miboiboika lava miboridana fantsom-bolo ambony dia manosika ny pataloha misy panta
Ireo leggings tsy mipetaka ary pataloha miendrika vatana. Lace jacquard, sexy ary tsara tarehy. Famolavolana amam-pandrefesana telo, miendrika tavy miforitra, atsangana ny andilany. Ny lamba matevina elastika avo dia mahomby amin'ny famononam-bavony, matavy sy manintona, malefaka sady tsy mahatosika.
Vehivavy tsy mitambatra fatina vehivavy fehin
Ity zazalahy amin'ny endriny mirindra ity dia fehikibo avo avo ary misy lamba roa sosona manodidina ny endrika midsection manampy ny handratra ny vavoninao, hampihena ny fehikibo ary mandentika ny vavoninao miaraka amin'ny tsindry malefaka, manome endrika malefaka sy mihamora.
Vehivavy mihosin-dàlana mihetsika pataloha vehivavy Panties Mesh Slimming Shaping Girdle ambanin'akanjo Pogoana fohy pihoatra
Ny lohataona sy ny fahavaratra dia pataloha sela fantsom-bavony amin'ny lohataona, ny kibo amin'ny mua dia vita amin'ny lamba vita elasticity izay afaka mamolavola vohoka malefaka malama. Ny lamba vita amin'ny lamba fofonaina dia fofonaina ary tsy sultry. Ny mpiambina ny landihazo anatiny, malefaka ary azo antoka. Voahangy malefaka malefaka, fa tsy mifatotra.
Fitaovana kalitao avo lenta amin'ny fehikibo miendrika vatan-damaody manapotika vatana mangatsiaka fehin-doko miaraka amin'ny mpampiofana mpiambina amin'ny kiraro ho an'ny vehivavy
Kibo fitotoana bokotra bokotra matotra, Vehivavy ambanin'akanjo .Ny Seamless Slimming Body Shaping Panty. Famoronana bokotra miaraka amin'ny Mpanazatra ny Mpanazatra amin'ny tolotra. Ny litera anglisy sy ny sarin-teny maresaka dia lamaody sy sexy.Shape olona tsara tarehy ianao.